သူငယ်ချင်း သဇင်ရဲ့မွေးနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံစီဝေးကွာနေပေမယ့် ငယ်ငယ်ကအမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်သတိရနေတဲ့ Ar-T – Cele Top Stars
မင်္ဂလာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းတွေကို အများဆုံးသီဆိုတတ်တဲ့ မန္တလေးသားလေး Ar-T ကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထား သူပါ။ Ar-T က နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခံစားချက်ပါတဲ့ အချစ်၊ အလွမ်း၊ အဆွေး သီချင်းတွေကို သီဆိုချိန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ခံအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး ဂီတမှတ်တိုင် တွေ များစွာကိုလည်း စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုကောင်းသလို စိတ်သဘောမနော လည်းကောင်းမွန်တဲ့ Ar-T ကို ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်း ကပါ ချစ်ခင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီကနေ့မှာတော့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် Ar-T က သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် သဇင်အတွက် အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးရင်း ငယ်ငယ်က အမှတ် တရတွေကို ပြန်လည်သတိရနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Ar-T က “ Happy Birthday သူငယ်ချင်း​ Thazin Thet ရေ. …. . 🎂 ငယ်ငယ်ကလို surprise လုပ်​ပေး ချင် တာ​နော် … ကျန်းမာ​ပျော်ရွှင်ပါ​စေ ❤👑❤ ” ဟုဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ပေးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အဆိုတော် သဇင်ကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ကလေးနှစ်ယောက် မေမေတောင်ဖြစ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီကနေ့ရဲ့ မွေးနေ့ရှင် သဇင်အတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
မင်ျဂလာပါပရိတျသတျကွီးရေ မွူးမွူးကွှကွှ သီခငျြးတှကေို အမြားဆုံးသီဆိုတတျတဲ့ မန်တလေးသားလေး Ar-T ကတော့ လူငယျပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထား သူပါ။ Ar-T က နောကျပိုငျးမှာတော့ ခံစားခကျြပါတဲ့ အခဈြ၊ အလှမျး၊ အဆှေး သီခငျြးတှကေို သီဆိုခြိနျမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ လကျခံအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပွီး ဂီတမှတျတိုငျ တှေ မြားစှာကိုလညျး စိုကျထူနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးဆိုကောငျးသလို စိတျသဘောမနော လညျးကောငျးမှနျတဲ့ Ar-T ကို ပရိသတျတှသောမက အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျး ကပါ ခဈြခငျကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ..။
ဒီကနမှေ့ာတော့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျော Ar-T က သူ့ရဲ့ငယျသူငယျခငျြးဖွဈသူ အဆိုတျော၊ သရုပျဆောငျ သဇငျအတှကျ အမှတျတရမှေးနဆေု့တောငျးပေးရငျး ငယျငယျက အမှတျ တရတှကေို ပွနျလညျသတိရနတော တှရေ့ပါတယျ။ Ar-T က “ Happy Birthday သူငယျခငျြး​ Thazin Thet ရေ. …. . 🎂 ငယျငယျကလို surprise လုပျ​ပေး ခငျြ တာ​နျော … ကနျြးမာ​ပြျောရှငျပါ​စေ ❤👑❤ ” ဟုဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျး ပေးလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။
အဆိုတျော သဇငျကတော့ အိမျထောငျကပြွီးကတညျးက ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ နိုငျငံခွားမှာ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ ကလေးနှဈယောကျ မမေတေောငျဖွဈနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ဒီကနရေဲ့ မှေးနရှေ့ငျ သဇငျအတှကျ အမှတျတရ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။